भगवान ईसाईहरु कष्ट भोग्नु हुन्छ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > परमेश्वरसँगको अनुभव > परमेश्वरले किन ख्रीष्टियनहरूलाई दुःख पार्नुहुन्छ?
येशू ख्रीष्टका सेवकहरूको हैसियतमा हामीलाई मानिसहरू विभिन्न किसिमका दुःखकष्ट भोग्नुपर्दा सान्त्वना दिन अक्सर आग्रह गरिएको छ। कष्टको समयमा, हामीलाई खाना, आश्रय वा कपडा दान गर्न भनियो। तर दु: खको समयमा कहिलेकाहिँ परमेश्वरले हामीलाई किन मसीहीहरूलाई दुःखकष्ट रहिरहन दिनुहुन्छ भनेर वर्णन गर्न लगाउनुका साथै शारीरिक राहतको लागि सोध्नु पनि पर्छ। यो जवाफ दिन गाह्रो प्रश्न हो, विशेष गरी जब शारीरिक, भावनात्मक, वा आर्थिक निराशाको समयमा सोधिन्छ। कहिलेकाँही प्रश्न यस्तो हुन्छ कि परमेश्वरको चरित्रलाई प्रश्न गरिन्छ।
औद्योगिक रूपमा पश्चिमी संस्कृतिमा दुःख भोगिरहेका मसीहीहरूको अवधारणा प्राय: संसारको आर्थिक रूपले गरीब क्षेत्रका पीडित मसीहीहरूको भन्दा धेरै फरक छ। मसीहीहरूको हैसियतमा, हामीले भोग्ने पीडाबारे कस्तो आशा हुनुपर्दछ? केही इसाईहरूलाई सिकाइएको छ कि एक पटक तिनीहरू इसाई बनेपछि उनीहरूले अब उप्रान्त तिनीहरूको जीवनमा कष्ट भोग्नुपर्दैन। उनीहरूलाई यो सिकाइएको छ कि विश्वासको कमीले गर्दा मसीही दु: खकष्ट हुन्छ।
मसीही जीवनमा दुःखकष्ट अप्रत्याशित हुनु हुँदैन
यदि हामी कष्टमा छौं भने, यो तपाईंको सान्त्वना र मुक्तिका लागि हुनेछ, जुन हामीले पनि भोग्नु परेको पीडा सहन स्थिर रहन प्रभावकारी साबित हुनेछ; यदि हामी सान्त्वना पाएका छौं भने यो तपाईंको सान्त्वना र मुक्तिका लागि हो; र तपाइँको लागि हाम्रो आशा निश्चित छ, किनकि हामी जान्दछौं: तपाईले जति कष्ट भोग्नु भएको छ, त्यसरी नै सान्त्वना पनि।
डेभिड ल्यारी द्वारा
परमेश्वरले किन मसीहीहरूलाई दुःखकष्ट रहिरहन दिनुहुन्छ?